အိုဆာကာ တက္ကသိုလ် - ဝီကီပီးဒီးယား
၁၇၂၄ တွင် တည်ထောင်ခဲ့ (Kaitokudo)
Chartered on November 22, 1919 as Osaka Prefectural Medical College
Re-established on May 1, 1931 as Osaka Imperial University
အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂.၃ ဘီလီလျံ
(ဂျပန်ယန်း ၂၆၄.၃ ဘီလီယံ)
Suita, Osaka, ဂျပန်နိုင်ငံ
အားကစားနှင့်ဆက်နွယ်သော အဖွဲ့ ၅၈ ခု၊ ယဉ်ကျေးမှုနှင့် ဆက်နွယ်သော အဖွဲ့ ၆၈ ခု 
Macchi မိချောင်း (တရားဝင်မဟုတ်)
အိုဆာကာ တက္ကသိုလ် (大阪大学, Ōsaka daigaku?) သို့မဟုတ် ဟန်ဒိုင်း (阪大, Handai?) သည် ဂျပန်နိုင်ငံ၊ အိုဆာကာမြို့တွင် တည်ရှိသော အမျိုးသား တက္ကသိုလ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အိုဆာကာခရိုင် ဆေးကောလိပ်အဖြစ် စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ဂျပန်နိုင်ငံ၏ ဆဌမမြောက် သက်တမ်းအရှည်ဆုံး တက္ကသိုလ်တစ်ခုဖြစ်ကာ ဂျပန်အမျိုးသားတက္ကသိုလ် ၇ ခုထဲမှ တစ်ခုအပါဝင်ဖြစ်သည်။ အိုဆာကာတက္ကသိုလ်တွင် ရူပဗေဒဆိုင်ရာ နိုဘယ်ဆုရှင် ဟီဒီကီ ယုကာဝါကဲ့သို့ များလှစွာသော ကျော်ကြားလှသည့် သိပ္ပံပညာရှင်များစွာ အလုပ်လုပ်လျက်ရှိသည်။
QS World University Ranking အရ ဂျပန်နိုင်ငံတွင် တတိယမြောက် အကောင်းဆုံးသော အဆင်မြင့်ပညာရေး သင်ကြားနိုင်သော တက္ကသိုလ်(ကမ္ဘာ့အဆင့် ၆၇) ဖြစ်သည်။
အိုဆာကာတက္ကသိုလ်၏ မူလအစကို ပြန်ပြောင်းကြည့်မည်ဆိုလျှင် အိုဆာကာမြို့လယ်တွင် အိုဆာကာခရိုင် ဆေးပညာကျောင်းအဖြစ် တည်ထောင်ခဲ့သော ၁၈၆၉ ခုနှစ်ကို ပြန်သွားရမည်ဖြစ်သည်။ နောင်တွင် ထိုဆေးပညာကျောင်းသည် တက္ကသိုလ်တည်ထောင်ခွင့်အမိန့်(၁၉၁၈ ခုနှစ် အင်ပါယာ အမိန့်တော်အမှတ် ၃၈၈ အရ) ၁၉၁၉ ခုနှစ်တွင် အိုဆာကာခရိုင် ဆေးကောလိပ်အဖြစ် တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ထိုနောက် အသစ်တည်ထောင်လိုက်သော သိပ္ပံကောလိပ်နှင့် ပေါင်းစည်း၍ အိုဆာကာ အင်ပါယာတက္ကသိုလ်(大阪帝國大学）ကို ၁၉၃၁ ခုနှစ်တွင် တည်ထောင်ခဲ့သည်။ နောင်နှစ်နှစ်အကြာတွင် အိုဆာကာ နည်းပညာကောလိပ်ကို တက္ကသိုလ်၏ အင်ဂျင်နီယာကျောင်းအဖြစ် ပေါင်းစပ်ခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးတွင် တက္ကသိုလ်အား အိုဆာကာ တက္ကသိုလ်အဖြစ် ၁၉၄၇ ခုနှစ်တွင် အမည်ပြောင်းလဲခဲ့သည်။
၁၉၄၉ ခုနှစ် အစိုးရ၏ ပညာရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုစနစ်အရ နာနီဝါအထက်တန်းကျောင်းနှင့် အိုဆာကာအထက်တန်းကျောင်းတို့ကို ပေါင်းစည်းခဲ့ကာ အိုဆာကာတက္ကသိုလ်သည် သိပ္ပံ၊ ဆေးပညာ၊ အင်ဂျင်နီယာ၊ စာပေနှင့် ဥပဒေစသော မဟာဌာနကြီးများဖြင့် ၎င်း၏ စစ်ပြီးခေတ် ပညာရေးကို စတင်ခဲ့သည်။ ထိုနောက် မဟာဌာနကြီးများ၊ ဘွဲ့လွန်ဌာနများနှင့် သုတေသနအင်စတီကျူတို့ကို ဆက်တိုက်ဆိုသလို ထူထောင်နိုင်ခဲ့သည်။ ထိုအထဲမှ အင်ဂျင်ီနယာသိပ္ပံကျောင်းသည် ဂျပန်အမျိုးသားတက္ကသိုလ်များထဲတွင် ထိုကဲ့သို့သော ကျောင်းမျိုးတွင် ပထမဆုံးသော ကျောင်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပြီး သိပ္ပံနှင့် အင်ဂျင်နီယာစည်းမျဉ်းဥပဒေသတို့မှ ကောင်းမွန်ရာတို့ကို ထုတ်နှုတ်သင်ကြားသော ကျောင်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပြီး လူမှုသိပ္ပံကျောင်းသည် စိတ်ပညာ၊ လူမှုဗေဒနှင့် ပညာရေးတို့ကို စိတ်ဝင်စားမှု ကျယ်ပြန့်သမျှကျယ်ပြန့်စွာ ပြန်လှန်လေ့လာနိုင်သော ကျောင်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။ တည်ရှိပြီးသား မဟာဌာနကြီးများကို အခြေတည်၍ ၁၉၅၃ ခုနှစ် အစိုးရပညာရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုစနစ်အရ ဘွဲ့လွန်ဌာန ၁၀ ခုကို ထပ်မံဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ ဘာသာစကားနှင့် ယဉ်ကျေးမှု ဘွဲ့လွန်ကျောင်းနှင့် အိုဆာကာ နိုင်ငံတကာ ပြည်သူ့မူဝါဒ ဘွဲ့လွန်ကျောင်းတို့ကို ထပ်မံဖွင့်လှစ်ခဲ့ရာ ၁၉၉၄ ခုနှစ် ဘွဲ့လွန်ကျောင်းပေါင်း ၁၂ ခုအထိ ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။
ပြည်စုံသော တက္ကသိုလ်စီမံချက် ပြီးမြောက်စေရေးအတွက် ပြန့်ကျဲနေသော မဟာဌာနကြီးများကို ဆုအီတနှင့် တိုယိုနာကာ ပရဝဏ်အတွင်းသို့ ပေါင်းစည်းရန် ၁၉၉၃ ခုနှစ်တွင် နာကာနိုရှီမ ပရဝဏ်အတွင်းရှိ အိုဆာကာ တက္ကသိုလ်ဆေးရုံကို ဆုအီတ ပရဝဏ်အတွင်းသို့ ပြောင်းရွေ့ခဲ့သည်။ ၂၀၀၇ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလတွင် အိုဆာကာတက္ကသိုလ်နှင့် အိုဆာကာတက္ကသိုလ် နိုင်ငံခြားအရေး လေ့လာရေးကျောင်းတို့အား ပေါင်းစည်းခြင်းအားဖြင့် စီမံချက် ပြီးမြောက်ခဲ့သည်။ ထိုသို့ နိုင်ငံခြားရေး လေ့လာရေးကျောင်းနှင့် ပေါင်းစည်းမှုသည် အိုဆာကာတက္ကသိုလ်အား ဂျပန်နိုင်ငံရှိ နိုင်ငံခြားအရေး လေ့လာရေးကျောင်းပါဝင်သော အမျိုးသားတက္ကသိုလ်နှစ်ခုမှ တစ်ခု ဖြစ်လာစေခဲ့သည်။ ထို့ပြင် ထိုသို့ ပေါင်းစည်းမှုသည် တက္ကသိုလ်အား နိုင်ငံတွင် အကြီးဆုံးသော အမျိုးသားတက္ကသိုလ် ဖြစ်လာစေခဲ့သည်။
၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် အိုဆာကတက္ကသိုလ်သည် ၎င်းဝက်ဘ်ဆိုဒ်၏ အသွင်ပြင်အား အရေးကြီးသော ပြောင်းလဲမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ထိုပြောင်းလဲမှု၏ ရလဒ်မှာ ဂျပန်ဘာသာစကား မတက်ကျွမ်းသော လူတစ်ဦးအတွက် အလွယ်တကူ သိလိုသည်တို့ကို သိရှိနိုင်ခဲ့ပြီး အိုဆာကာဧရိယာအတွင်းနေထိုင်ကြသော နိုင်ငံတကာ ကျောင်းသားလဲလှယ်မှု အစီအစဉ်အရ ကျောင်းသားများ၊ နိုင်ငံတကာ သုတေသနပညာရှင်များနှင့် နိုင်ငံမှ ထွက်ခွာလာခဲ့သူများ စသော အသုံးပြုသူတို့အတွက် အသုံးပြုသူ ပိုမိုလွယ်ကူရိုးရှင်းစေသော ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့သည်။
အိုဆာကာ တက္ကသိုလ်၏ ဖွဲ့စည်းပုံတွင် ဘွဲ့ကြိုများအတွက် မဟာဌာနကြီး (学部) ၁၁ ခုရှိပြီး ဘွဲလွန်ဌာန (大学院) ၁၆ ခု၊ သုတေသနအင်စတီကျူ ၂၁ ခု၊ စာကြည့်တိုက် ၄ ခုနှင့် တက္ကသိုလ်ဆေးရုံ ၂ ခု ပါဝင်သည်။
အိုဆာကာ တက္ကသိုလ်သည် ပညာရေး လဲလှယ်သင်ကြားမှု အစီအစဉ်ကို ကမ္ဘာတဝှမ်းရှိ တက္ကသိုလ် အများစုနှင့် သဘောတူညီမှု ပြုလုပ်ထားသည်။ (၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် ၉၂ ခု) ထို့ပြင် အိုဆာကာ တက္ကသိုလ်ရှိ ဌာနကြီးများမှ အခြားသော နိုင်ငံများမှ ဌာနကြီးများ၊ အင်စတီကျူများနှင့်လည်း လဲလှယ်ရေး သဘောတူညီချက်များ ပြုလုပ်ထားကြသေးသည်။ (၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် ၃၆၆ ခု) ထိုသဘောတူညီချက်များကြောင့် နိုင်ငံတကာမှ ကျောင်းသားများသည် အိုဆာကာ တက္ကသိုလ်တွင် လွယ်ကူချောမွေ့စွာ ပညာသင်ကြားနိုင်သလို အိုဆာကာ တက္ကသိုလ်မှ ကျောင်းသားများသည်လည်း ပင်လယ်ရပ်ခြားရှိ အခြားသော နိုင်ငံများမှ ကျောင်းများ၊ အင်စတီကျူများတွင် လွယ်ကူချောမွေ့စွာ ပညာသင်ကြားနိုင်ခဲ့သည်။
↑ ၁.၀ ၁.၁ ၁.၂ ၁.၃ Osaka University: Outline of the University။ ၈ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၈ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Undergraduate and Graduate schools & facilities — Osaka University. Osaka-u.ac.jp. Retrieved on 2011-06-26.
↑ History of Osaka University — Osaka University. Osaka-u.ac.jp (2007-10-01). Retrieved on 2014-06-17.
↑ University Exchange Agreements — Osaka University Archived 2010-01-08 at the Wayback Machine.. Osaka-u.ac.jp (2010-11-01). Retrieved on 2011-06-26.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အိုဆာကာ_တက္ကသိုလ်&oldid=718445" မှ ရယူရန်
ဂျပန်နိုင်ငံရှိ တက္ကသိုလ်နှင့် ကောလိပ်များ
ဤစာမျက်နှာကို ၁၃ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၅:၂၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။